Igama hhayi yini undlunkulu noma bahlukane nakho afunge
Ingabe kukhona umuntu oye wezwa kuBaba futhi le nkulumo hhayi: "Ekuqaleni wayekhona uLizwi"? Leli gama, ngokusho uJohane, zazinezincwadi ezintathu - Nkulunkulu. Kodwa lendoda wanamuhla nge izwi izincwadi ezintathu ezihlobene hhayi uNkulunkulu njengomNaziri, futhi kolimi oluyinhlamba. Mat, ngamanye amazwi.
inhlamba nemishwana uvinjelwe ukusetshenziswa ezincwadini, abezindaba kanye nomphakathi. Ngo impilo ejwayelekile, ukusetshenziswa inhlamba futhi akwamukeleki, ngoba la mazwi baphathe incazelo wokwedelela futhi abangele ukulimala siqu anolaka, okuyiwona necala lobugebengu. Ngakho uma uthola kunzima ukuba aqonde futhi amukele kwezinkambiso nezimiso zokuziphatha zomphakathi-ke umbuzo: "Kungani ungeke inhlamba?" - futhi ungakwazi ukunikeza impendulo: "Ukuze kube ngumvuzo isenzo ekhubazekile."
I etymology inhlamba amazwi has izinguqulo eziningana. Ngokusho kwelinye engalimazi kakhulu isiqalekiso amazwi - lutho kodwa ifomula umlingo okuletha amaMagi lasendulo. Mhlawumbe ngempela. Nokho, uma ungeyena shaman noma umthakathi, siqhuba zindlela, + khona-ke kufanele ucabange ukuthi bahlukane nakho afunge. Kungani abantu basebenzisa imishwana unprintable? Ngokuvamile, kusetshenziswa uhlaka, baveza imizwa yabo bayaxoxa, obonisa usizi silulumagama sakhe. A abalandeli abasha inhlamba ngokusebenzisa "omdala" amazwi esenqatshelwe, zama ukuthi lokho abakusho kuyiqiniso izingane ayisekho. Omabili ahlala avela bangakufanelekeli indoda ekhaliphile. Ngakho-ke, uma inkulumo yakho imigqomo ezinenhlamba amazwi-izimuncagazi, zama ukusebenzisa amathiphu kanjani yekani ukufunga inhlamba.
Okokuqala, kumelwe siqaphele ukuthi ukusetshenziswa inhlamba (futhi omunye izinguqulo mat - ukuthi ngisho sokuqalekisa, futhi kubangele isiqalekiso), enza umonakalo wangempela. Word - impahla kanye ephambene yokuthi ukuthumela usebenzisa inhlamba lizobuya njengowokuzalwa boomerang.
Indlela bahlukane nakho nokufunga ethi: indlela yokuqala. Uma une ulimi olungcolile isiqalekiso isuswe ukucindezeleka ngokomzwelo noma kabusha amandla ezimbi zanqwabelana, konke ulula - Zama ehlise, futhi kuphela ezimweni engenakugwemeka, ukuqapha inkulumo yakhe, esikhundleni izwi ezinenhlamba ezifanayo umsindo, kodwa akusho mat. Ngokwesibonelo ezihlekisayo uwukubonakaliswa "amandla waseGibhithe" othanda iqhawe omunye uchungechunge umndeni. Noma "Khahlela" - igama yawenza by intsha TV series ngokuphila umfundi. Kodwa kuhle okudingeka ukwenze ukuze ayibulale amazwi engcolisa inkulumo yakho.
Indlela bahlukane nakho nokufunga ethi: imfashini yesibili. Uma ukusetshenziswa izinkulumo unprintable ngokuvumelana nemithetho yomphakathi Kuyicala ke kulandelwe isijeziso (ngokomzimba noma zokuziphatha). Ngokwesibonelo, sasikhipha okuyihlazo Mot ungakwazi zinike schelbany noma pinching ezibuhlungu. Noma uma sikubeka ezandleni ushingamu, futhi ngemva ngamunye mat, silahle wakhe bese zenyuka ngokushesha uyayekela, emshaya. Ngokuhamba kwesikhathi, ezingqondweni khuluma inhlamba okuzohlobana ne emizweni ezibuhlungu. Esikhundleni esetshenziswa elilodwa umzwelo ezinye izinhlawulo okungezona yezimali. Okusho ukuthi, uma ngempela ufuna nokufunga izindebe welulela ku ukumamatheka ububanzi. Le ndlela kunezinzuzo ezimbili: esandleni esisodwa abantu abayithandi i ukumamatheka silly futhi kungafanele, enye ifunda ushintshele imizwa.
Indlela bahlukane nakho nokufunga ethi: indlela yesithathu. Ukuze kuye kwanyamalala ulwazimagama yakho inhlamba, kufanele ayifakiwe indilinga labangane zabantu ukusizakala isithombe "sokuthunga izicathulo zokudakwa." Ngamafuphi nje, uqale ingxoxo nomuntu alikhuthazi ukusetshenziswa uhlaka, futhi ngesikhathi uzophiwa ngokuzenzakalelayo kuzonyamalala ngolimi lwakho ezikhulunywayo. Khumbula, noma iyiphi indlela kuhle uma ufuna ngempela ukuba balahle ulimi olubi.
Mission imbangela: ukukhohlwa yangaphambili?
Izibonelo zokubonisa yokwesaba: ukusetshenziswa ukwesaba ukulimaza
Ithonya umbala umuntu: shades kwemizwa
Film "Academy sokufa": nabalingisi izindima
Casio CDP 120: ekuhlaziyeni izici
Ukubuya okusha kaBheni Arfa?
Isihloko cwaningo Biology Jikelele iqoqo izinqubo ezilawula lo mkhuba wokuphila
Biography of Michelangelo, umculi omkhulu Yenguquko
I-Class Class First 5 * (Turkey, Alanya, Kargicak): ingqalasizinda yehhotela, incazelo yekamelo, isevisi, ukubuyekezwa
Sandwich echazayo zokupheka
Hlela u-Ost: inganekwane noma iqiniso?